Mareeykanka Iyo Ruushka oo Gantaalo Culus Iskugu Goodiyay!! – Xogbaahiye Online
HomeWararka MaantaMareeykanka Iyo Ruushka oo Gantaalo Culus Iskugu Goodiyay!!
Waxaa sii kordhay xiisada u dhaxeysa dalalka milateri ahaa ugu waaweyn caalamka ee Mareykanka iyo Ruuskha oo qarka u saaran inay ku dagaalamaan dalka Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in Ruushka uu u diyaar garoowo sidii ay u difaaci lahayeen gantaalka lagu weerrari doonno Suuriya si loogu falceliyo suntii kiimikada ahayd ee la sheegay in dowladda Suuriya ku weerrartay meel ka mid ah Suuriya isbuuci lasoo dhaafay.
Saraakiil sare oo ka tirsan Ruushka ayaa ku hanjabay in ay diyaar u yihiin in ay u jawaaban haddii Maraykanka ay isku dayaan in ay ku soo ridaan gantaal. Trump ayaa wacad ku maray in jawaab adag ay ka bixin doonaan wixii dhacay.
Madaxweyne Bashar al-Assad oo kaalmo militari ka haysta Ruushka ayaa diiday in ay geysteen weerarka kiimikada ah. Qoraalkiisa Twitterka Trump wuxuu Assad ku tilmaamay “Xayawaan heysta hubka kiimikada”.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in wararka sheegaya in Suuriya lagu weerraray sunta kiimikada ay tahay mid lagu daandaansanayo in la xumeeyo xiriirka xooggan ee kala dhaxeya Suuriya.